“Waxay Xusuustaan oo kaliya Dhibkii aan gaarsiiyay Maxamed Saalax ee ma jiro Mid Xusuusta Dhibaatadii ay Mareen….”- Ramos oo Afka furtay Xalay – Gool FM
“Waxay Xusuustaan oo kaliya Dhibkii aan gaarsiiyay Maxamed Saalax ee ma jiro Mid Xusuusta Dhibaatadii ay Mareen….”- Ramos oo Afka furtay Xalay
Byare September 9, 2018
(England) 09 Sab 2018. Taageerayaasha xulka England ee xalay ku sugnaa Gegada Wembley ayaa ku ooriyay Kabtanka xulka Spain Sergio Ramos iyagoo gucanaya dhaawicii uu u geystay Maxamed Saalax Final kii Champions League.
Spain ayaa xalay 2-1 uga adkaatay England ciyaartii saaxiibtinimo ay wada yeesheen, Ramos ayaana sheegay inuu rajeenayay soo dhaweyn midan ka fiican kaddib markii ay taageerayaashu ku oorinayeen markasta uu kubbada taabto.
“Waxaan Jeclaan lahaa Soo dhaweyn ka duwan midan,” Kabtanka Real Madrid ayaa sidaa u sheegay saxaafadda ciyaarta kaddib.
“Waxay xusuustaan hal Ficil oo Finalkii Champions League ah, laakiin ma jiro qof xusuusta hanjabaadyadii dilka ahaa ay la kulmeen reerkeyga iyo Caruurteyda.
“Waxaynu bilownay Zaman cusub iyo Tababare leh khibrad badan mana jirto si ka fiican aan ku sameyn lahayn midaa oo ahayn guushii Wembley.
“Fashilka waa marka ay kooxdu heysan Ruuxiyad, laakiin maanta waxkasta ayaan bixinay, taasina waa tan ugu yar ee loo baahan yahay Xulka Qaranka iyo Real Madrid.”.